चीन लेबल विनिर्माण कम्पनी, सस्तो कस्टम स्टिकर थोक - क्रिस्टल कोड
क्रिस्टल कोड प्याकेजिङ्ग टेक्नोलोजी (शंघाई) कं, लिमिटेड (क्रिस्टल कोड पछि पछि) 2011 मा स्थापित, क्रिस्टल कोड प्याकेज समूह को अधीनस्थ। हामी उच्च प्रविधि उद्यमहरू हौं जुन आर एन्ड डी र विशेष स्टिकर लेबल र प्याकेजिङ सामग्रीका लागि उत्पादनमा फोकस छ। इस्पात, रासायनिक, विरोधी नकली, खाना र पेय उद्योगको लागि प्याकेज सामग्री सहित मुख्य उत्पादनहरू। विशेष गरी हामीसँग उच्च / कम तापमान प्रतिरोध लेबल आपूर्तिमा प्रचुर मात्रामा अनुभव छ, हामीसँग हाम्रो आफ्नै प्रविधि र उन्नत उत्पादनहरू छन् र विश्वभरका थुप्रै ग्राहकहरूलाई सम्पूर्ण व्यावसायिक समाधान प्रदान गरेको छ।
प्रत्येक ग्राहक अन्तरक्रियालाई प्रभाव पार्न एक मौका हो। यही कारणले हामी आफ्नै स्टिकर बनाउन र मिल्ने सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँदछौं। सेतो पेपर पानाहरूमा प्रिन्ट गरिएको छ, हाम्रो पूर्ण-रंग निजीकृत स्टिकरहरू स्टिकर आकार र आकारको एक विस्तृत दायरामा आउँछन्। सैकड़ों पूर्ण रूपमा अनुकूलन स्टिकर डिजाइनहरू उपलब्ध छन्, तपाईले एक शैली फेला पार्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई आवश्यक छ - र त्यसपछि तपाईंको व्यवसायको नाम, लोगो वा सम्पर्क जानकारी थप्नुहोस्।
एक विश्वसनीय vinyl स्टिकर मुद्रण कम्पनी खोज्दै हुनुहुन्छ? चीनमा उच्च गुणस्तर, उत्कृष्ट मूल्य अनुकूलन vinyl स्टिकर प्रिन्टको लागि थप हेर्नुहोस्। तपाईंको व्यवसायलाई प्रबर्धन गर्नका लागि आदर्श, हामी विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरूको प्रभाव पार्ने निश्चित दायराका लागि विभिन्न व्यावसायिक डिजिटल अनुकूल स्टिकर सिर्जना गर्छौं। तपाईले व्यक्तिगत दिनको लागि मिति बचत गर्न वैवाहिक शुभकामना र उपकरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँका आवश्यकताहरू अनुरूप गर्न कुनै पनि आकार, डिजाइन र मात्रा पाउनुहोस्, र हामी विश्वभर जहाँ पनि तिनीहरूका ढोकामा सीधा पोस्ट गर्नेछौं।
पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत रूपमा स्टिकर लेबलहरू
तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि चीजको बारेमा केही बिचार राख्नुहोस् हामी तपाईको आफ्नै स्टिकर बनाउन मद्दत गर्दछौं। हामी तपाइँलाई पूर्ण रूपमा निजीकृत स्टिकर लेबलहरू क्रिस्टल कोडमा अनलाइनमा प्रस्ताव गर्दछौं, तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि तरिकामा तपाईको स्टिकर सिर्जना गर्नुहोला। यसलाई रमाइलो र विशेष बनाउनु होस् जब तपाईं यसलाई अनोठो छुनुहोस्। हामी कसरी देखाउन सक्दछ यो कसरी सजिलो छ तपाई स्टिकरहरू कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको माउसको केहि द्रुत क्लिकहरूसँग साँच्चै अद्वितीय छ।
छिटो र सजिलो धन्यवाद स्टिकरहरू, परस्पर बधाईहरू र पछाडि पछाडि फर्कनुहोस्। हाम्रो स्टिकर लेबुल गुणस्तर टाँस्नेक प्रयोग गर्दछ जसले तपाईंको लेबलले धेरै सतहहरू र पातहरूलाई निस्सन्देही जोड्छ भनेर हटाउँछ जब हटाइन्छ। तपाईंको डिजाइन पनि स्टिकर पेपरमा प्रिन्ट गरिएको छ जुन तत्वहरू विरुद्ध टिकाऊ र बलियो छ।
त्यसोभए एकदम सानो रमाइलो छ किनकि तपाईंले मज्जाको ड्यास थप्नु भएको छ र तपाईंको व्यक्तित्वको चुन्च जुन केहि चाहानुहुन्छ जुन केहि अनुकूलित स्टिकरहरूसँग चाहानुहुन्छ। आफ्नो आफ्नै स्टिकर बनाउनुहोस् र पूर्ण रूपमा निजीकृत बनाउनुहोस् स्टिकर लेबलहरू आज क्रिस्टल कोडमा अनलाइन गर्नुहोस्! स्टिकरहरूबाट सबैको लागि बच्चाहरूको सजिलो धन्यवाद धन्यवाद। स्टिकरहरू, सबै केहि सजिलो क्लिकहरूसँग बनाइएको।
मा क्रिस्टल कोड, तपाईको आवश्यकताहरू एक-पटक छोटो-रन लेबल प्रोजेक्ट समावेश छ, वा उच्च मात्रामा चलिरहेको कार्यक्रम, हामी तपाईंको व्यवसायको मूल्य मान्दछौं। हामी तपाईंलाई ध्यान र उच्च गुणस्तर, अनुकूलन लेबल प्रदान गर्न आवश्यक इनपुट प्रदान गर्दछ जुन तपाईको उच्च अपेक्षाहरू पूरा वा अधिक पार गर्दछ।
हामी धेरै सफल व्यवसाय सम्बन्धहरू गर्यौं जुन हामी विकसित गरेका छौं, केहि ब्यवसायिक तीस वर्षको उमेरमा, हामी पहिला केवल एक रोटरी प्रेसको साथ सुरु गरौं।
आज, आधुनिक आधुनिक प्रविधिद्वारा संचालित दुई आधुनिक सुविधाहरू र उद्योगको सबैभन्दा राम्रो कर्मचारीहरूद्वारा, हामी आधारभूत मानहरूमा आकर्षित गर्छौं जसले लामो समयसम्म सम्बन्धी सम्बन्धहरूको नेतृत्व गर्दछ, र लेबल मुद्रणमा केही साँच्चै उल्लेखनीय फीटहरू।
हामी तपाईंको लेबल मुद्रण आजको आवश्यकता आज सुरू गर्ने मौकाको स्वागत गर्दछौं।
शीर्ष गुणवत्ता A4 आकार स्वयं चिपकने वाला इंकजेट पारदर्शी लेबल s ...
स्वयं चिपकने वाला मुद्रण कागज
उच्च गुणवत्ताको जलरोधक print. * * ११ इन्च विनाइल म्याट मसी
स्वत: चिपकने a4 इंकजेट प्रति पारदर्शी विनाइल स्टिकर
थोक मूल्य पाल्तु जनावर चमकदार स्वयं चिपकने फिल्म स्टिकर कागज ...
A4 चमकदार कागज इंकजेट चमकदार फिल्म स्वयं चिपकने वाला स्टीकर
कारखाना मूल्य मुद्रण योग्य a4 चमकदार फिल्म इंकजेट पालतू स्टीकर
उच्च गुणवत्ता a4 मुद्रण योग्य चमकदार पाल्तु जनाव फिल्म विनाइल इंकजेट स्टिक ...
A4 खाली मुद्रण योग्य वाटरप्रूफ पारदर्शी विनाइल स्टिकर ...
खाली मुद्रण योग्य वाटरप्रूफ चमकदार फिल्म इंकजेट विनाइल स्टिकर ...
इंकजेटको लागि होलसेल A4 स्पष्ट स्टीकर पेपर पारदर्शी फिल्म ...
सेतो x x ११ वाटरप्रूफ चमकदार लेपित इंकजेट स्टीकर पेपर एस ...
इंकजेट प्रिन्टको लागि नयाँ मुद्रण योग्य a4 विनाइल स्टिकर पेपर म्याट ...
A4 आकार प्रिन्ट योग्य वाटरप्रूफ इंकजेट स्टिकर मैट विनाइल पेप ...
ईंकजेटको लागि कारखाना प्रत्यक्ष a4 वाटरप्रूफ विनाइल स्टिकर पेपर ...
यसका लागि सेल्फ चिपकने मैट फिल्म विनाइल प्रिन्टेबल स्टीकर पेपर ...
.5..5 * ११ ईन्च ए paper पेपर विनाइल इंकजेट पारदर्शी फिल्म सेल्फ-अडे ...
खाली मुद्रण योग्य A4 म्याट विनाइल इंकजेट स्टीकर कागज
ई jजेटको लागि A4 आकारको म्याट लेपित pvc vinyl कागज
उच्च गुणको मुद्रण योग्य म्याट फिल्म विनाइल इंकजेट स्टीकर
चिपकने वाला वाटरप्रूफ म्याट विनाइल इंकजेट स्टीकर कागज पाना
वाटरप्रूफ प्रिन्ट योग्य a4 पालतू कागज म्याट इंकजेट स्टीकर
ईन्कजेटको लागि स्वयं चिपकने A4 म्याट लेपित विनाइल स्टिकर पेपर